Kudiki coup inokudzidzisa iwe kuchengetedza mabhegi kuchengetedza nzvimbo - Nhau - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Diki coup rinokudzidzisa iwe kuchengetedza mabhegi kuchengetedza nzvimbo
Maitiro ekuchengetedza mabhegi anogara ari musoro wevakadzi, nekuti mabhegi akasiyana nehembe uye haakwanise kupetwa, saka nzvimbo yakakwana inodiwa kuchengetedza mabhegi. Asi havazi vese vakadzi vanogona kuve newadhiropu yakakura yekuchengetedza mabhegi. Nhasi ini ndichaunza mashoma matipi ekuchengetedza mabhegi.
Chekutanga hunyengeri, hove hombe dzinodya hove diki. Seizvo zita rinoratidzira, nzira iyo hove hombe dzinodya hove diki ndeye kushandisa mapakeji mahombe uye mabhegi madiki ekuchengetedza masaga rimwe nerimwe. Iyi nzira inonyanya kukodzera mabhegi ane akaomarara matehwe. Kazhinji, pakuchengeta mabhegi, chinonyanya kunetsa nderudzi urwu rwemasaga, asingakwanise kupetwa kana kusvinwa. Panguva imwecheteyo, mamwe mafiringi anofanirwa kuiswa mubhegi kuti arege kusvinwa uye kuremara. Kuisa bhegi diki muhombodo hombe hakungochengetedze chete nzvimbo inodiwa yekuchengetera, asi zvakare inoshanda sekuzadza bhegi, iro rinogona kutsanangurwa sekuuraya shiri mbiri nedombo rimwe.
Wechipiri hunyengeri: putsa pasuru yacho mupumburu imwe. Iyi nzira inokodzera mabhegi echirafu. Nekuda kwemashoko acho, bhegi rerudzi urwu runogona kupetwa zvakasununguka uye hazvisi nyore kuumbika, kuti tikwanise kumonera bhegi racho zvakanaka kuita denderedzwa, tobva tarirongedza maererano nekudzika kwemavara. Paunenge uchiwanzoida, ona kuti ndeapi marangi system aunoda. Iyo pasuru zvakare iri nyore kwazvo kuwana.
Yechitatu hunyengeri kugadzira yako bhegi yekuchengetedza bhegi. Mawadhiropu nemakabati azere, asi kuchine mabhegi akawandisa. Ndoita sei? Muchokwadi, isu tinogona kuyedza yedu pachedu DIY uye kugadzira yakapfava bhegi yekuchengetedza bhegi, iyo inogona kugadzirisa nyore nyore dambudziko iri. Unofanirwa kugadzirira machira akakwana uye wochicheka kusvika kuhukuru hwebhegi kaviri. Mushure mekucheka, peta jira iri hafu kubva pakati uye simbisa iwo maviri magumo pamwechete, kuitira kuti bhegi rekuchengetera rive rakagadzirira. Ehe, iyi ingori nhanho yekugadzira bhegi rekuchengetedza bhegi. Unogona kugadzira akawanda masaga ekuchengetedza zvichienderana nenhamba yemabhegi ako. Mushure mekugadzira akawanda mabhegi ekuchengetera, gadzirisa aya masaga ekuchengetedza patambo uye osungirira iwo kuseri kwemusuwo. Kana kumadziro. Paunenge usingaishandise, iwe unongofanirwa kuiturika pamadziro kana kuseri kwemusuwo, uye haizotora nzvimbo yakawanda. Kana iwe uchida kuishandisa, ingo dhonza bhegi kubva parutivi.
Yapfuura:Matipi ekuchengetedza bhegi iwe ausingazive
Tevere:Zvakavanzika zvemabhegi evasikana ekuzora